Thursday September 30, 2021 - 13:01:31
Markii ugu horraysay mas'uuliyiinta wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa su'aalo laga weydiiyay guuldarradii foosha xumeed ee dhowaan kasoo gaartay dalka Afghanistan.
Lloyd Austin oo ah wasiirka difaaca oo ay su'aalo weydiiyay guddiga golaha Sanat-ka Mareykanka ayaa sheegay in wixii ka dhacay Afghanisyan ay ahaayeen wax ka baxsan dhammaan wixii ay saadaalinayeen saraakiisha wasaaradda difaaca.
Wuxuu carrabaabay in xoogagga Taliban ay si fudud kula wareegeen talada Afghanistan iyagoo aan iska caabin weyn kala kulmin ciidamadii xukuumaddi Camiilka aheyd ee sida aadka ah ay uqalabeeyeen dowladaha reergalbeedka.
"ma aanan fahamsaneyn qota dheeraashiyaha musuq maasuqa ka dhax jiray hoggaanka ciidamada afghanistan iyo daciifnimada saraakiisha sarsare ee melleteriga, sidoo kale ma filayn saameynta taban ee ka dhalan kartay heshiisyadii lala gelayay Taliban xilligii lagu guda jiray wadahadalladii dooxa,heshiiskii dooxa qudhiisa ayaa dhulka geliyay macnawiyaatkii ciidanka Afghanistan" ayuu yiri wasiirka difaaca xukuumadda Washington.
Jeneraalka ugu sarreeya ciidanka Mareykanka oo isna ka hor hadlayay xildhibaanada American-ka ayaa Taliban ku eedeeyay in ay wali xiriir wanaagsan laleedahay Al Qaacidda islamarkaana ay ku howlantahay falal argagaxiso sida uu hadalka udhigay.
"Daalka Afghanistan waxaa ka qeyb qaatay 800,000 askari American ah halka ay nooga dhinteen 2461 askari" ayuu hadalkiisa sii raaciyay Lloyd Austin .
Bishii Agoosto ee lasoo dhaafay ayay talada Afghanistan la wareegtay xarakada Taliban arrinkaas oo nabar naxdin leh ku noqday dhammaan dowladaha reergalbeedka oo Mareykanku ugu horreeyo.